« Live accoustique » : Ahemotra ny 10 novambra ny sehon’i Fanja Andriamanantena sy Rija Ramanantoanina -
AccueilVaovao Samihafa« Live accoustique » : Ahemotra ny 10 novambra ny sehon’i Fanja Andriamanantena sy Rija Ramanantoanina
« Live accoustique » : Ahemotra ny 10 novambra ny sehon’i Fanja Andriamanantena sy Rija Ramanantoanina
10/10/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Noheverina hotanterahina ny 13 oktobra ho avy izao. Noho ny trangana pesta misy eto amintsika, ka nanafoanana ireo hetsika famoriam-bahoaka, dia ahemotra ny 10 novambra izao ny « Live accoustique », izay hiarahan’i Fanja Andriamanantena sy Rija Ramanantoanina. « Tsy miova ny fisehon’ny hetsika fa araka izay efa namolavolana’izy mianadahy mianaka azy ihany, ary mety hiha-matotra aza satria nitombo ny fotoana hanaovana famerenana », araka ny fanamarihan’ny Gasy Event mpikarakara ny hetsika. Hitovizan’izy mianadahy mianaka ireto ny fironana kokoa any amin’ny hira manakaiky ny jazz, samy manga feo, ary samy havanana amin’ny fitendrena piano. Hanana ny anjara toerana lehibe ao anatin’ny seho ireo hira efa nahafantarana azy ireo taloha.
Ankoatra ny fiangalian’ny tsirairay ny hirany, zava-baovao entin’ny fampisehoana ihany koa ny fampiaraham-peo. Efa andran-tsira ny « Hianatra aho », izay hira noforonina sy narindran’i Fanja Andriamanantena. Hanana ny anjara toerana lehibe ao anatin’ny seho ireo hira efa nahafantarana azy ireo taloha.
Ankoatra azy mianadahy mpihira, mpitendry efa kalaza sy manana ny maha-izy azy no hanotrona azy ireo mandritra ny seho. Ao anatin’izany ry Zafera (gitara besobe), Sammy Andriamanoro (piano), Datita Rabeson (gitara), Naly (amponga maroanaka) ary Hasina (Trompetra sy sax).
Raha efa manana ny datiny ny fampisehoana sasany, mbola miandry ny fanapahan-kevitra samihafa kosa ny seho hafa. Mbola eo am-piandrasana ny daty avy amin’ny Tafita, mpiandraikitra ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina amin’izao fotoana ny fampisehoana ataon’i Lalatiana, nokasaina natao ny alahady lasa teo.